Baro Qalabka Isku-dhafka ah ee Adobe Illustrator | Abuurista khadka tooska ah
Adobe Illustrator: Qalabka Isku Darka
Judith Murcia | | dhowr
Waxaa jira aaladaha Sawirka ee na siin kara ciyaar badan haddii aan naqaan, mid ka mid ah ayaa ah wajiga.
Sida magaceedu tilmaamayo, waxay noo oggolaan doontaa inaan isku darno waddooyinka. Waxaan hagaajin karnaa tirada jeer ee lagu celceliyay, sidaas darteedna natiijada ugu dambeysa. Waxaa jira tabaha iyo ikhtiyaarrada kala duwan, qodobkaan waxaan ku arki karnaa qaarkood.
1 Abuur iskudhaf fudud oo sawir leh
2 Codso midab si aad uhesho
3 Masaafada la cayimay
Abuur iskudhaf fudud oo sawir leh
Marka hore, waxaan baran doonaa sida loo sameeyo isugeyn fudud si loo fahmo sida ay u shaqeyso. The tallaabooyinka la raacayo waa sida soo socota:
Waxaan fureynaa barnaamijka oo waxaan xariiq ku sameeynaa qalabka burushka.
Waxaan nuqul ka sameeynaa safka oo kor saarnaa.
Waxaan dooranaynaa labada istaroog.
Waxaan tagnaa liiska ugu sarreeya: Ujeeddo - Fusion - Abuur.
Si otomaatig ah iskudhafka khadadka ayaa la abuuri doonaa. Taasi waa, inta udhaxeysa labada sadar ee bilowga ah, istaroogga ayaa lagu celin doonaa. Tallaabada xigta waa in la go'aansado imisa jeer ayaan rabnaa in lagu celiyo. Si aan u garaacno lambarka waa inaan raacnaa dariiqan: Ujeeddo - Fusion - Fusion fursadaha.
Daaqad ayaa la soo saari doonaa taas oo aan ka raadin doonno ikhtiyaarka "Tallaabooyinka la cayimay" halkaasoo aan ku calaamadeyn karno tirada saxda ah ee aan dooneyno. Maaddaama aynaan lahayn tababar badan, waxaan calaamadeyn karnaa ikhtiyaarka "horudhac" si aan u aragno natiijada ugu dambeysa.
Codso midab si aad uhesho
Waxaan ku ciyaari karnaa midabka aan ku codsanayno isku-darka, taas oo ah, hal ikhtiyaar ayaa ah in lagu dhajiyo midabada kala duwan khadadka samee midab. Aynu eegno tusaale muuqaal ah si loo fahmo fikradan.
Masaafada la cayimay
Ikhtiyaar kale oo qalabkani noo oggolaado ayaa ah inaan go'aanno la masaafada aan rabno inaan codsanno xarriiqda iyo xariiqa. Waxay kuxirantahay saameynta aan rabno ama sida ugufiican ugu habboon naqshadeynta, ikhtiyaarkan ayaa fure u noqon doona in la gaaro natiijo wanaagsan.
Codsiyada qalabkani waa kuwo aan dhammaad lahayn, waa inaan ku dabaqnaa hal-abuurkeenna si aan uga faa'iidaysanno. Waa qalab ku habboon in si qoto dheer loogu daro walxaha. Si aan kuugu dhiirrigelinno, waxaan ku tusineynaa fikrado fudud oo naqshadeyntaada siin doona taabasho gaar ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Adobe Illustrator: Qalabka Isku Darka
Sawir qaade, ku samee boorar wacdaro leh qaab fudud
Buug gacmeed, aan ogaanno waxay tahay